Askar Boolis ah oo tababar loogu soo gabagabeeyay Muqdisho (Sawiro) – Radio Muqdisho
Tababarkani maanta loo soo xiray askartaan ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa muddo 3 asbuuc ah siinayay saraakiil ka socday dowladda Turkiga.
Askartaan oo tiro ahaan gaareysay 20 ayaa bartay casharo ay kamid yihiin ilaalinta madaxda, baarista danbiyada gaarka ah iyo sida loo baaro gadiidka iyo guryaha iyadoo aan waxyeelo loo geysanayn bulshada.
Munaasabad shahadooyin lagu gudoonsiyey ciidanka ayaa lagu qabtay xarruunta dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaliyeed Jeneraal Kaahiye ee magalada Muqdisho, waxaana ka qeyb galay wasiir ku xigeenka wasaradda aminga gudaha Soomaliya, Safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaliya iyo saraakiil isugu jirta Soomaali iyo Turki.
Muraat Artobaan oo ka mid ah sarakiisha Turkiga ee ciidanka booliska Soomaliyeed tababarka siinayey ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyabhiii ay barteen ciidanka.
Taliyaha dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Jeneraal Kaahiye , Gen: Cabdirashiid Aaden Xirsi ayaa tilmaamay in tababarkani uu qeyb ka yahay mataaneynta dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo kan Turkiga oo dhowan billowday.
Safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya, Olgan Bekar oo ka hadlay munaasabadda a yaa sheegay in tababarka ay saraakiisha Turkiga siinayaan ciidanka booliska uu qeyb ka yahay tageerada ay siiyaan Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka wasaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdinaasir Maxamed Cali ayaa kaga mahad celiyey dowladda Turkiga taageerada ay la garab taagan yihiin dowladda Soomaliya iyo shacabkeeda , isagoo ciidanka tababarka loo soo xiray kula dar-daarmay in casharada la baray ay ugu adeegaan shacabka Soomaliyeed .
Waa tababarkii u horeeyay ee noociisa ah oo dowladda Turkiga ay siiso ciidanka Booliska Soomaaliyeed laguna qabto gudaha Dalka.